Sida loo Ma Fuji Photo Recovery ka Fuji FinePix HS10 / HS11
> Resource > Ladnaansho > Siduu u Fuji Photo Recovery (Fuji FinePix HS10 / HS11)
Xaaladaha Common sababaya maqal la'aan image ka kamaradaha Fuji
1. dhaco tirtiray sawiro ka kamaradaha Fuji aan gurmad kasta.
2. qalad ah formatted aad kaadhka xusuusta camera Fuji oo dhan sawiro laga badiyay.
3. qaba virus, kaas oo lagu dilay oo dhan sawirada ku kaydsan kaadhka xusuusta.
4. kala iibsiga sawirka ayaa ku guuldareysatay iyo sawiro asalka lagu madhiyo.
Sida loo sameeyo dib u soo kabashada sawir Fuji (FinePix HS10 / HS11)
Haddii ay dhacdo in aad dhibaato ay ka mid ka mid ah dhibaatooyin ka kor ku xusan, inaad si fiican u soo kaban lahaa sawiro ka Fuji camera digital sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah, iyo joojiso isticmaalka camera aad u hesho saamiga ugu weyn ee guul inay ka soo kabsadaan sanamyadiinna lumay. Trick ee fulinaya kabashada sawir Fuji waa in la helo barnaamij xaq u soo kabashada ka mid ah in badan oo qalab tayadiisa kala duwan ee suuqa.
Wondershare Photo Recovery waa sida software ah soo kabashada sawir Fuji laga yaabaa in aad raadineyso. Ka sokow soo kabsaday images lumay Fuji camera digital, waxa ay sidoo kale soo kaban karto sawiro lumay ka magac camera kale sida Panasonic, LG iyo kabsado sawirada tirtiray ka EOS Canon. The interfaces fududahay in la isticmaalo iyo user-friendly ha idin ​​soo kabashada lumay image samayn iyada oo aan wax dhib ah jiraan. Haddii aad tahay dadka isticmaala Mac, u leexdo xagga Wondershare Photo Recovery for Mac .
Download oo isku day version maxkamad free of Fuji camera sawir recovey qalab hadda.
Next, aynu isticmaali version Windows oo la isugu perfrom kabashada sawir camera Fuji.
Step1. Connect aad camera Fuji in kombiyuutarka
Ka hor inta wax kale samayn, xiriiriyaan camera Fuji in computer ka iyo in la hubiyo waxa lagu ogaan karaa sida warqad drive on your computer ah. Burcad barnaamijka oo guji "Start" si ay ugu guuraan.
Step2. Dooro camera Fuji in iskaan
Your camera Fuji sidoo kale la baari doono barnaamijkan sida halkan warqad drive ah. Waxaa Dooro oo guji "Scan" in ay sii wadaan.
Step3. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan Fuji photos camera
Muddo gaaban ka dib, sawiro lumay ee aad camera Fuji waxaa laga heli doonaa, oo waxaad iyaga ku eegaan karo mid ka mid ah si uu u hubiyo tayada. Dooro kuwa aad rabto in aad soo kabsadaan oo guji "Ladnaansho" in ay iyaga oo dhan dib la mid click.
Video tutorial soo kabashada sawir Fuji